Ritmix RBK 450 - उपकरण वास्तवमा यो छैन हुनत, ई-पुस्तक निर्माता भनिन्छ कि। उपकरण कार्यक्षमता तपाईं विकलांग एउटा सानो ट्याब्लेट यसलाई कल गर्न अनुमति दिन्छ। पुस्तक मिडिया प्लेयर, रंग स्क्रीन, भिडियो ह्यान्डल गर्ने सक्षम पाए। दुर्भाग्यवश, उपकरणले खराब प्रत्यक्ष कार्य (पुस्तकहरू पढ्दा) सम्हाल्छ।
जो लेखमा थप छलफल गरिनेछ यन्त्र, सबै उपकरणहरूमा क्षेत्र मा उपलब्ध को सरल को छ। यो एक सानो बिट लागत - लगभग4हजार rubles .. उहाँले वायरलेस नेटवर्क र तेस्रो जेनेरेसन नेटवर्क काम गर्दैन। तपाईं (केवल फर्मवेयर को नयाँ संस्करण मा यो सुविधा उपलब्ध छ) पाठक मा खेल खेल्न सक्छ भने, यो कुनै पनि ट्याब्लेट लागि विकल्प बोलाउन बाहिर गरियो। अक्सर यो उपकरण छोराछोरीलाई बन्दैछ। यो तपाईं यति मा, पुस्तकहरू पढ्न कार्टून हेर्न र गर्न अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह, मनोरञ्जन काम गर्न मौका हराइरहेको छैन, तर यो मोडेल - यो एक सभ्य विकल्प छ।
Ritmix RBK पाठक 450 एक विशेष प्रविधिले सिर्जना यन्त्र हो। यो एक सात इन्च स्क्रिन प्राप्त गरेको छ। कारण प्रयोग उपकरण गर्न निर्माता स्पष्ट चित्र र राम्रो विपरीत प्राप्त गर्न सक्षम थियो। अर्कोतर्फ यस्तो समाधान आँखा तनाव कम गर्छ। निर्माता TFT-एलसीडी प्रयोग गर्न छनौट किन छ। उपभोक्ताहरु को यो विकल्प दाना विश्वास छ, तर यो अनुभव र समय सिद्ध भएको छ।
ई-पुस्तक Ritmix RBK 450 भन्दा अक्सर खेलाडीहरू विभिन्न प्रयोग भएको एक विशेष प्रोसेसर सिर्जना गरियो। अडियो - उपकरण 10 भिडियो स्वरूप र7काम गर्न सक्षम छ। वक्ताले एकदम हेडफोन बिना संगीत सुन्न सहन सकिने छ। कुनै पनि इनकार बिना पर्याप्त stably उपकरण।
तपाईं पनि पूर्ण HD प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। ई-पुस्तक यो केवल चिरपरिचित स्वरूप पत्ता लगाउन सक्षम छ भनेर देखाउँछ, तर पनि ती जो सुनुवाइ मा छैन। तपाईं धेरै अडियो ट्रयाकहरू वा उपशीर्षक एक मानक फाइल खेलाडी संग काम गर्दै छन् यदि पाइयो, तपाईं समस्या हुन सक्छ। इच्छित भने, छवि दृश्य ढाँचा सम्पादन गर्न अनुमति। उहाँले 4.3 स्थिति सेट गरिएको छ।
चमक - पूर्ण कार्यान्वयन प्रकार्य। तपाईं अधिकतम चिन्ह प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तस्वीर स्पष्ट र तीव्र हुन्छ। त्यहाँ केही रंग लागि रंग प्रजनन काम गर्ने मौका छ। यस्तो कार्य बरु ई-पुस्तकहरू भन्दा, मात्र मिडिया खेलाडीहरू मा निहित अक्सर छन्।
Ritmix RBK 450 मा प्ले कुनै पनि हुन सक्छ अडियो प्रारूप: सबै भन्दा प्रसिद्ध रूपमा, वा छैन। तिनीहरूलाई केही मानक रूपमा मान्यता छन्। ध्वनि शक्तिशाली छ र यो हेडफोन काम गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। त्यहाँ pluses र minuses छन्। उदाहरणका लागि, रक, पप, र बास काम भने, उपकरण यसको सबै भन्दा राम्रो देखाउँछ। यसको अनुकूलन विकल्प उपलब्ध, साथै एक तुल्यकारक। पुस्तकालयको क्रमबद्ध गर्न, एक विशेष प्रविधि सिर्जना गरियो। यो तपाईं विधा, कलाकार र एल्बम द्वारा अडियो फाइलहरू रचना गर्न अनुमति दिन्छ।
कारण निर्माता TFT प्रकार स्क्रिन प्रयोग भएको छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, उहाँले एउटा ई-पुस्तक Ritmix RBK 450 (लगभग सधैं सकारात्मक यसको बारेमा समीक्षा) सिर्जना गर्न उपयुक्त र प्लेट कच्चा छ। तुलना असफल भए तापनि यसलाई हुन स्थान हो। पाठक फाइल र स्वरूप काम गर्न स्वतन्त्र छ, जो खराब सम्पर्क ट्याब्लेट र netbooks संग। दुर्भाग्यवश, भिडियो प्लेब्याक को बढी उन्नत कार्य, पुस्तकहरू पढ्दा लागि बुरा आवेदन कार्यक्षमता।
fb2 र EPUB: उपकरणले ज्ञात डिजिटल स्वरूप अन्तरक्रिया गर्न सक्षम छ। तर मानक आवेदन सामग्रीहरू र फुटनोटको को तालिका काम गर्दैन। HTML फाइलहरू हेर्ने गर्दा नै समस्या उत्पन्न।
मा Ritmix RBK 450 (तल वर्णन विशेषताहरु) कहिलेकाहीं RTF पढेर समस्या हो। ढाँचा "उड" गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै चित्र देखाइएको छ। यो ढाँचामा फुटनोटहरू पाठ मा सम्मिलित, त्यसैले सामान्य पढ्न छन्। अनुप्रयोगको मानक TXT फाइल कठिन काम गर्न। पाठक स्वतः अनुच्छेद मा पाठ तोड्न सक्षम छैन।
पिडिएफ फाइल 10 भन्दा बढी एमबी वजन छैन भने, यन्त्र यसलाई खोल्न सक्षम छ। आवेदन इन्टरफेस सम्झाउँछ मानक "Adob"। पुस्तक धेरै ठूलो छ जब, पाठक झुन्डियो र यो मात्र एक विशेष बटन मार्फत हुन सक्छ पुनः लोड गर्नुहोस्। थप फाइदा पुस्तक हेर्दै गर्दा विभिन्न प्रकारका चित्रहरु progruzhat कि कल गर्न अनुमति छ।
दुर्भाग्यवश, यन्त्र फाइल र कागजात स्वरूप र DjVu काम गर्दैन। निर्माता ग्यारेन्टी समस्या निकट भविष्यमा हल गरिनेछ। केवल पाठक फ्लैश यसलाई Suffice।
डिजाइन राम्रो र प्यारा छ। वजन थियो प्रदर्शन बिगार्छ छैन ताकि 310 ग्राम सानो आयाम :. 19 x 12 x 1.1 सेमी स्क्रिन विशेष फिलिम लेपित। को रियर भाग अपारदर्शी सामाग्री बनेको छ भन्ने तथ्यलाई कारण, यो उपकरण लगभग हातमा धकेल्न छैन। निर्माता एक चुम्बक मा एक महल एक छाला अर्को विकल्प को आवरण त्याग्न निर्णय गरे।
जब धेरै को लागि खरीद गर्ने निर्धारण कारक मूल्य हुनेछ। पाठक, तपाईं अन्य समान उपकरणहरू संग तुलना भने, कम लागत मा राम्रो कार्यक्षमता प्रतिष्ठित।
ई-पुस्तक Ritmix RBK 450, तल समीक्षाएँ जो, राम्रो प्रोसेसर मा काम गर्छ, र यसको कोर 400 मेगाहर्ट्ज मा सञ्चालन। यो एकदम रूपमा7इन्च को स्क्रीन मा व्यक्ति अन्तरक्रिया गर्न सकेसम्म सहज बनाउन पर्याप्त छ। रोशनी, उपलब्ध छ यसलाई रङ्गिन छ र आफ्नो औंला वा लेखनी संग छोयो भने काम गर्दछ। उत्तरार्द्ध सही पक्षमा तल एक विशेष स्लट छ। सेन्सर कमजोर स्पर्श मा असफल हुन सक्छ। केही उपभोक्ताहरु लागि पृष्ठ परिवर्तन को लागि superfluous बटन हुनेछ। मा / बन्द, मात्रा नियन्त्रण: उपकरणमा साधारण मात्र तीन बटन छ। यो मेनु पहुँच लागि जिम्मेवार छ देखि सबै भन्दा उल्लेखनीय, तेस्रो बटन छ।
राम 256 MB हो। निर्मित 4GB निर्माता प्रदान। इच्छित भने, एक मेमोरी कार्ड 16 जीबी (अधिकतम आकार) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो आवश्यक आवेदन, खेल र अन्य फाइलहरू अधिकांश उपकरण अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ। पाठक पृष्ठभूमि संगीत को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उपकरणहरू को मद्दत बच्चाहरु को लागि कार्टून देखाउने वा आवाज रिकर्डर रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। अतिरिक्त बोनस रूपमा क्यालेन्डर र एउटा ग्यालरी उपस्थिति ध्यान दिनुहोस् गर्न आवश्यक छ। फर्मवेयर को धेरै परिमार्जनहरू को रिलीज पछि, नवीनतम संस्करण धेरै खेल छ। त्यसैले यो धेरै लोकप्रिय Ritmix RBK 450 बन्नेछ।
ब्याट्रि, एक विस्तारित भिडियो हेर्ने पछि4घण्टासम्म पछिल्लो एक सानो अब, तपाईं संगीत सुन्न सक्नुहुन्छ सक्षम छ। शब्द को प्रयोग बढाउन, अन्तिम कार्य स्क्रिन बन्द गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसपछि ब्याट्री तल धेरै बढी बिस्तारै चल्नेछ। सक्रिय पढाइ मात्र प्रयोग7घण्टा पछि ब्याट्री विच्छेदन लागि प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। उपकरण अन्तमा उपकरण चार्ज एक USB-पोर्ट एसी एडप्टर देखि सबै भन्दा राम्रो छ। यस मामला मा, तपाईं मात्र स्क्रीन, छैन पाठक मा गर्न सक्नुहुन्छ।
उपभोक्ताहरु फाइदा गुणस्तर विधानसभा, एउटा सानो मोटाइ भन्छन्। टचस्क्रिन मालिक को उपस्थिति पनि सकारात्मक पक्ष उल्लेख। सेट यांत्रिक प्रभाव र विरूपण विरुद्ध उपकरणको सुरक्षा हुनेछ आवरण आउँछ। हामी साथीहरूको साथ उपकरण तुलना भने, छैन यस्तो मूल्य लागि उनलाई हरेक एक पर्याप्त विधानसभा छ। मालिकहरूले पाठक ढाँचाको एक ठूलो संख्या काम गर्न सक्षम छ भन्ने खुसी छन्। उच्च छवि गुणस्तर पनि छ प्राण प्रसन्न। मानव आँखा, फन्ट राम्रो कथित को Ritmix RBK 450. फर्मवेयर लागि त सुविधाजनक "Buggy।" छैन हेडफोन दुई बन्दरगाह बस छ, र पनि पोको उपलब्ध लेखनी छ। शानदार दृश्य को कुनामा। उपभोक्ताहरु कुनै पनि उजुरी छैन। को ब्याकलाइटद्वारा उज्ज्वल र विपरीत छ, आराम र सजिलै उपकरण सञ्चालन गर्न। केही उपभोक्ताहरु भिडियो हेर्नको र संगीत सुन्ने लागि सान्त्वना उपलब्ध विकल्पहरू भन्छन्।
बहुमुखी प्रतिभा र एउटा सानो मूल्य आफ्नो काम गर्न, यन्त्र चाँडै लोकप्रिय भयो। केही बेफाइदा ओभरल्याप गर्न सजिलो सबै लाभ।
ग्राहकहरु अधिकांश तथापि, तिनीहरूले उपलब्ध छन्, Ritmix RBK 450 मा नकारात्मक पक्षहरू फेला छैन। उपकरण केही मालिक दुई हप्ता भित्र तल खण्डन। पनि स्वभाविक बन्द को रूप मा केही बेफाइदा छ। उपभोक्ताहरु सानो क्षमता ब्याट्री सामना गर्दै हुनुहुन्छ। उपकरण केही मालिक बिस्तारै काम गर्दछ र एक लामो समय को लागि, "उहाँले सोच्छ" यो नकारात्मक छ। अक्सर त्यहाँ डाउनलोड आवेदन र अन्य सफ्टवेयर समस्या हुन सक्छ। उपभोक्ताहरु को एक ठूलो अनुपात उपकरण तपाईं एक हप्ताको लागि छोड किनभने यदि र रोक्छ काम पाठक प्रयोग गरेनन्, लगभग हरेक दिन सामेल गर्न आवश्यक छ कि गुनासो। केही अक्सर टिप्पणी देखिने यो भारी छ, यन्त्रहरूको वजन वर्ग सन्तुष्ट छैनन्। कमजोर प्रोसेसर - चर्चा बुरा पाठक लागि अर्को विषय। आँखा पढ्दा थकित बन्न सक्छ।
PSP र यसको मुख्य विशेषताहरु लागि मेमोरी कार्ड
गोली "Tesla": विशेषताहरु, स्थान, समीक्षा
को जारोस्कोप के हो? फोनमा गाइरो - यो के हो?
मेरो टाउको मा हल्ला के चक्की मदत? मेरो टाउको मा हल्ला देखि औषध र लोक उपचार
खट्टा क्रीम संग स्पन्जले केक - यो मिठाई फेला पार्न छैन राम्रो छ!
अनिद्रा लागि safest उपाय: सामान्य निद्रामा कसरी प्राप्त गर्ने?
संवहन हीटर: प्रकार र आवेदन
ब्रियान्स्क: जनसंख्या, रोजगारी
मास्को राज्य विश्वविद्यालय (MGU) Lomonosov पछि नाम: इतिहास, वर्णन, विशेषता
पसलहरू "बीनहरू": ठेगानाहरू, समीक्षाहरू। ग्रोरीरी स्टोरको नेटवर्क
कसरी घर मा बांस हेरचाह गर्न: सुझावहरू